AH: ဘေဂျင်းက Hello Kitty စားသောက်ဆိုင်
ဘေဂျင်းက Hello Kitty စားသောက်ဆိုင်
တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့က Sanlitun Village မှာတော့ Hello Kitty စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသတဲ့။ ထူးထူးခြားခြား တစ်ဆိုင်လုံးကို ဟဲလို ကစ်တီ ကြောင်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ဒီဆိုင်ကလေးမှာတော့ လူတစ်ယောက်စားသောက်မယ်ဆိုရင် ယွမ်ငွေ ၁၆၀ (၂၅ ဒေါ်လာ) လောက်ကျသင့်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆိုင်မှာ လူကျနေလို့ ထိုင်စောင့်ရမယ်ဆိုရင်တောင် အရုပ်ကလေးပိုက်ပြီး စောင့်နေပေါ့.....
စားပွဲထိုးတွေကလည်း Hello Kitty ၀တ်စုံလေးတွေနဲ့....
Hello Kitty ဘူးလေးတွေ.....
ဟောဒီလို ထမင်းလည်းစားရင်း အမှတ်တရလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါသတဲ့....
အစားသာ ဖြောင့်အောင်စား၊ ကလေးတွေကို ဟောဒီလို ထိန်းပေးမယ့်လူရှိသဗျ.... :)
ဟောဒါကတော့ YouTube က စားသောက်ဆိုင်အကြောင်း သတင်းလေးပါ ခင်ဗျား...
လူတွေများနော်... ပိုက်ဆံဘယ်လို နှိုက်ယူရမလဲ ဆိုတာကို အမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့ အမျိုးမျိုး ထွင်နိုင်ပ.....
Posted by AH at 2/16/2012 09:10:00 PM
စံပယ်ချို February 17, 2012 at 12:18 AM
ကိုရင် February 17, 2012 at 12:57 AM
စကားမစပ် ပိုနေတာတွေကို ပြန်ထုပ်လို့ ရလား..တစ်ချို့ တစ်ချို့ တွေလိုပေါ့ :D
သိင်္ဂါကျော် February 17, 2012 at 5:18 AM
Hello Kitty ကြိုက်တယ်.. ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ..
နေ၀သန် February 17, 2012 at 10:15 AM
သြော်.. ကိုရွှေတရုတ်တို့ကလည်း အမျိုးမျိုးနော်.. တခါက အိမ်သာခွက်တွေ... အိမ်သာပုံစံတွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်လည်း ၀တို့ပဲထင်ပါရဲ့..း))
မဒမ်ကိုး February 17, 2012 at 11:26 AM
မရှိရင်မဒမ်အားထောင်နဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပါ လာအားပေးမယ် တနေကုန်မပြန်ဘူးး))
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် February 17, 2012 at 3:03 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 18, 2012 at 3:06 AM
ထူးခြားဆန်းပြားမင်္ဂလာဆောင်များ - ၂
ဒီပန်းသီး ဘယ်လောက်လဲ။ ၄၅၀။ ကားပေါ်မြန်မြန်တက်ပါ။
တရုတ်က အားကစား အသုံးအဆောင် ကုမ္ပဏီကြီးကို တရားစွဲတေ...
FLIP သို့မဟုတ် Floating Instrument Platform
ဘာမြင်ရလဲ? - ၂
ဘာမြင်ရလဲ? - ၁
ထူးထူးခြားခြား ကမ္ဘာ့မြေအောက်မှ ဆေးရုံ
နှင်းခဲထဲမှာ ၂ လ ပိတ်မိနေတာတောင် အသက်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ...
အိမ်သာတက်တာကြာလို့ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ လူ
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးကို Google Earth ကနေ 3D ပံ...
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှ Status များ
နှင်းဆီပွင့်ပေါင်း ၁၇၂၅ ပွင့်ကိုသုံးထားတဲ့ ဗယ်လင်တ...
Valentine's Day ဟာသာများ
Haper သို့မဟုတ် လောကဓံကို အရှုံးမပေးတဲ့ ခွေးကလေး
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဟန်းဖုန်းနဲ့ အပြာကားခိုးကြည့်တဲ့ အန္ဒ...
Facebook ပေါ်က သူငယ်ချင်း ၁၅၂ ယောက်ရဲ့ပုံကို Tattoo...
ကျွန်တော်နှင့် ရောက်တတ်ရာရာ အတွေးစများ ၃
ထူးခြားဆန်းပြား မင်္ဂလာဆောင်များ - ၁
ခေတ်အဆက်ဆက်က မြန်မာ ပိုက်ဆံများ
ဟာသတိုလေးများ - ၆
၁၈၇၀ ခုနှစ်က ရှန်ဟိုင်း ပုံရိပ်များ
အတွေ့အကြုံရှိတာ တစ်ပန်းသာတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပညာရေးလက်မှ...
တရုတ်ပြည်မှာ အသစ်တွေ့တဲ့ ဒိုင်နိုဆော မျိုးစိတ်သစ်
တစ်ရွာလုံး ထီပေါက်တာ တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့ ကံဆိုးသူ...
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ Hacker များ - ၂